Coronavirus: WHO oo dalbatay inaan "la siyaasadeyn" fayraska Covid-19 - BBC News Somali
Coronavirus: WHO oo dalbatay inaan "la siyaasadeyn" fayraska Covid-19
Xigashada Sawirka, EVN
Madaxa hay'adda Caafimaadka Adduunka ee (WHO) ayaa ku baaqay midnimo, xilli ay hay`addu cambaareyn joogto ah kala kulmeyso Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Mar uu shalay qabtay shir jaraa'id, Agaasimaha Guud ee WHOS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wuxuu difaacay shaqada WHO wuxuuna ku baaqay in la soo afjaro siyaasadeynta fayraska Covid-19.
Wuxuu ku eedeeyay WHO inay "la safan yihiin Shiinaha", wuxuuna sheegay in hay`addu ay ka gaabisay waxqabadkeeda xanuunka safmarka ah.
Dhanka kale, Xoghayaha Arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ooka jawaabayay su`aalo laga weydiiyay shirka, wuxuu sheegay in maamulkiisa uu qiimeyn ku sameynayo dhaqaalaha uu siiyo WHO, isagoo intaas ku daray; "Ururradu waa inay shaqeeyaan. Waa inay la yimaadaan natiijada waxyaabihii laga doonayay".
"Fadlan, hala muujiyo midnimo heer qaran ah, yaan la adeegsanin Covid-19 amaba dano siyaasadeed," Dr Tedros ayaa sidaas yiri. "Tan labaad, isku duubni daacad ah oo heer caalami ah, iyo hoggaan daacad ah oo Mareykanka iyo Shiinaha ah.
"Kan ugu awoodda badan waa inuu hoggaanka qabto, fadlan karantiila siyaasadeynta Covid-19," ayuu ku codsaday, hadal uu jeediyay oo loo arkay inuu jawaab u yahay eedeynta Trump, oo Talaadadii sheegay in WHO ay u muuqato "mid aad ugu janjeerta dhanka Shiinaha".
Xoghayaha Guud ee QM, António Guterres ayaa hore u difaacay hay'adda. Wuxuu dillaacitaanka xanuunka Covid-19 ku sheegay mid aan caadi ahayn, isla markaana qiimeyn walba oo ku saabsan sida loola tacaalay ay tahay arrin u taalla mustaqbalka.
"Haatan waa xilligii midowga, oo ay beesha caalamku si wada jir ah uga shaqeyn lahaayeen joojinta fayraska iyo cawaaqib xumadiisa," ayuu yiri.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale la sheegay inuu taageero u muujiyay WHO, oo uu shalay la hadlay Dr Tedros. "Wuxuu u xaqiijiyay sida uu ugu kalsoon yahay, iyo taageerada uu u haayo ururka wuxuuna diiday inuu u arko dagaal u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka," ayuu yiri sarkaal u hadlay madaxweynaha.
Saraakiil ka tirsan hay`adda Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay go`aankiisa ku saabsan inuu mamnuucayo dadka ka imaanaya Shiinaha wixii ka dambeeyay dhammaadkii January - tallaabadaas oo uu tan iyo markaas madaxweynuhu ku sheegay inay tahay mid looga hortagayo xakameynta faafitaanka fayraska.
Wararka kale ee Corona?
Xogtii ugu dambeysay, ee ay soo ururisay Jaamacadda Johns Hopkins, ayaa muujineysa in haatan dunida laga soo weriyay ku dhowaad 1.5 milyan oo kiisaska coronavirus ah iyo 90,000 oo dhimasho oo la xiriirta xanuunka
Soomaaliya waxay diiwaangelisay qofkii ugu horreeyay ee u dhintay fayraska corona. Sidoo kale kiisaska guud waxay gaareen 12. Waxaa jiro dad badan oo la karantiilay.
Ra`iisul Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa weli ku jira qeybta daryeelka degdegga ah balse xaaladdiisa ayaa la sheegay inay ka soo reyneyso
Tirada guud ee dhimashada xanuunka ee UK ayaa gaartay 7,000 - kaddib markii shalay la soo sheegay 938 dhimasho oo cusub
Tirada dadka u dhimanaya xanuunka ee Spain ayaa maalintii labaad oo xiriir ah sare u kacday, kaddib rajo laga qabay inay hoos u dhici doonto tirada dadka dhimanaya